▷ Maninona ny Fortnite no fako
Rehefa mahatratra ny haavon'ny lazany ny lalao iray Fortnite ny fanehoan-kevitra dia afaka tonga ary mandeha amin'ny fotoana rehetra. Mazava ho azy fa olona maro no tsy ho faly tanteraka amin'ilay lalao noho ny olana samihafa azo foronina.
Izany dia efa imbetsaka ny olona nanomboka niantso ny lalao a fako Ary zavatra iray izay tsy isalasalana, amin'ny fotoana sasany, mety hisy dikany noho ny antony maro.
Izany no antony hiresahantsika anio bebe kokoa momba izany ary hanome ohatra mazava iray izay nahafahantsika nanolotra ny iray amin'ireo olana izay Fortnite heverina ho fako io.
Antony mahatonga ny Fortnite hanary fako
Ny antony voalohany hananantsika fa ny lalao dia tena nijanona tsy tamin'ny nanombohany. Rahoviana Fortnite nahatratra ny tsena dia noheverina ho iray amin'ireo lalao tsara indrindra amin'ny Battle Royale nisy izany, saingy niova tsikelikely io.
Rehefa nandeha ny fotoana dia nanomboka nahatsapa izany ireo mpilalao Fortnite Nijanona tsy lalao intsony izy io ary nanjary zavatra nitovy tamin'ny vondrom-piarahamonina iray. Nanjary tsikaritra kokoa izany tamin'ny fahatongavan'ireo hetsika tsy tapaka.
Na izany aza, tsy io no olana lehibe mahatonga ny lalao heverina ho fako.
Tfue resabe tao Fortnite
Nanomboka nojeren'ny maso ratsy ny lalao taorian'ny mpilalao matihanina Tfue izay nahavita nahazo ny tompon-daka eran-tany Fortnite nifamaly tao anaty lalao iray.
Tfue, mpilalao Fortnite matihanina
rehefa Tfue tao anatin'ny fotoana fohy teo imason'ny mpilalao maromaro izy, ny lalao dia nahatonga ny toetrany hijanona tanteraka I niraikitra. Tsy nifandray tamina singa na zavatra nitovy tamin'izany izy, fa nijanona teo amin'ny toerany fotsiny ary tsy afaka nihetsika.
Izany dia namoaka ny hatezeran'ilay mpilalao ary noho izany, ny fitsikerana ny Fanatsarana Fortnite nanomboka tonga tamin'ny lafiny rehetra izy ireo.
Asehoy ny hevitra (1)